ချောကလတ်အရသာနဲ ့မရင်းနှီးသူများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ချောကလတ်အရသာနဲ ့မရင်းနှီးသူများ
Posted by phone_kyaw on Jul 7, 2012 in Copy/Paste | 53 comments
ထန်းလျှက်ခဲပဲ စားဘူးတဲ့ခလေးက ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ချောကလတ်ရဲ ့အရသာကို သိမှာလဲ။ နိုင်ငံခြားမှာ အနေကြာတဲ့ လူတစ်ယောက်ကလည်း မြန်မာပြည်မှာ ပြန်ပြီးနေဖို ့ဆိုတာက အင်မတန်ကို စဉ်းစားရတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါ။
ခင်ဗျားတို ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ကျနော့်ဘဝမှာ ထန်းလျှက်ခဲလည်း စားဖူးသလို ချောကလတ်လည်း စားဘူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ချောကလတ်တော့ သိတ်ပြီးမကြိုက်လှဘူး။ ထားလျှက်ခဲကမှ ပိုပြီး ကိုယ့်အတွက် သင့်တော်သလိုပဲ။ ဒါက ကျနော့်ခံစားချက်ပါ။ ကျနော့်အကြိုက်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ယနေ ့ကာလမှာ အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ မသိဘူး။ လူနေမှု ့ဘဝတွေကိုပြောတာပါ။ လေထဲကနေပဲ အခြေအနေကို အကဲခတ်လို ့ပဲရတယ်။ ဒါတောင် အတော့်ကို စုတ်ပြတ်နေပြီ။
ထိုင်းနိုင်ငံဟာ မြန်မာပြည်ထက် အတော်လေးကို ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာကို လက်ခံလား။ လက်မခံလို ့လည်းမရဘူး။ ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဗျာ။
ထိုင်းမှာအနေကြာခဲ့တဲ့ ကျနော်ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံကို ဩစတျေးလျနိုင်ငံကနေ ၆-နှစ်လောက်နေပြီးတော့ အလည်တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်တယ်။ အဲဒိမှာ ပြသနာက စတာပါပဲ။
အရင်တုန်းက ကိုယ်နေခဲ့တဲ့ အိမ်အစုတ်လေးမှာ သတိတရနဲ ့လေးငါးရက်လောက် သူငယ်ချင်းမိသားစုနဲ ့အတူ နေကြတာပေါ့ဗျာ။ ဟိုတုန်းကတော့ အဲဒိအိမ်ကို ကျနော်က အရမ်းကို ကောင်းတဲ့အိမ်လို ့ထင်တာ။ ရေမီးစုံတယ်။ ပျဉ်ထောင်သွတ်မိုးနဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချမ်းသာပြီလို ့ထင်နေတာ။ ရေချိူးတော့လည်း ရေပူပေးတဲ့စက်မလိုပါဘူး။ ချိူးရတာ အရမ်းကောင်းတယ်။
တနေ ့တော့ ဩစတျေးလျနိုင်ငံကနေ အဲဒိအိမ်မှာ သွားနေတော့ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ ရွံသလိုလို၊ နေချင်စိတ်ပျောက်သလိုလိုဖြစ်လာရောပဲ။ ရေချိူးတော့လည်း အေးလိုက်တဲ့ရေ။ ဒါနဲ ့ကျနော့်ကို သူငယ်ချင်းက ပြောတယ်။ မင်းက နိုင်ငံခြားကပြန်လာပြီး စောက်ဖင်ခေါင်းကျယ်နေပြီလားတဲ့…ဆိုပြီး ကဲ့ရဲ ့တာကို ခံရသေးတယ်။ မင်းအရင်တုန်းက ဘယ်လိုမျိူးနေခဲ့လည်းလို ့မေးတယ်။ ကျနော်ကအေးလို ့အေးတယ်ပြောတာကို…ဖင်ခေါင်းကျယ်တယ်လို ့ပြောစရာလားလို ့သူ ့ကိုမေးတော့ သူက မကျေနပ်တဲ့အကြည့်နဲ ့။
ကားစီးတော့လည်း သူတို ့ကားက အဲယားကွန်းမဖွင့်ထားဘူး။ ဒါနဲ ့ကျနော်က အဲယားကွန်းကို ဖွင့်တော့ ကားဆရာက ဒီကောင်ဖင်ခေါင်းကျယ်တယ်လို ့ထင်ပြန်ရော။ စောက်ပိုတွေလို ့ပြောတယ်။
ကျနော်ဖင်ခေါင်းကျယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဩစတျေးလျမှာ ဒိထက်ကောင်းတဲ့အိမ်၊ ရေ၊ ပူ၊ ရေအေးနဲ့အနေကြာလာခဲ့တာဆိုတော့ အကျင့်ပါနေပြီ။ အခုလိုမျိူး ရုတ်တရက် အရင်တုန်းက ဘဝကို ပြန်တွေ ့တော့ အဆင်မပြေချင်ဘူး။ သူတို ့ကလည်း ကျနော့်ကို မကြည်ဘူး။ဘာဖြစ်လို ့လဲ။
အခုတစ်လော အစိုးရက ပြည်ပရောက်တွေပြန်လာပါလို ့ခေါ်နေပေမဲ့ ပြန်တဲ့လူက နေရာကောင်းကောင်းရမှ ပြန်ကြတာကို တွေ ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အကြံပေးကောင်စီထဲမှာ ပါတဲ့လူတွေလောက်ပဲ အမေရိကန်နိုင်ငံကနေ ပြန်ကြပါတယ်။ အများစုကတော့ မပြန်ပါဘူး။ ဒီအထဲမှာ ထိုင်း မလေးနဲ ့စင်္ကာပူမှာ အလုပ်သွားလုပ်နေတဲ့လူတွေတောင် မပြန်ပါဘူး။ ဒါတောင် သူတို ့ကသာမန်အလုပ်သမားတွေပဲဖြစ်တယ်လို ့ဆိုပါစို ့။ တကယ့်ကို ချမ်းသာပညာတတ်နေတဲ့ လူတွေဟာ နိုင်ငံခြားကနေ မြန်မာပြည်မှာ ခြင်ကိုက်ခံပြီး ပြန်နေပါ့မလားဆိုတာက တွေးစရာတစ်ခုပါ။ မနေပါဘူး။ ခြွင်းချက်တော့ ရှိတယ်။ ဒါက နိုင်ငံခြားထက်သာတယ်ဆိုရင်တော့ ပြန်ပါလိမ့်မယ်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရင် ကျနော်တောင် ကို်ယ့်အတွက်မကို်က်ဘူးဆိုရင် ဘယ်တော့မှတိုင်းပြည်ကို ပြန်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အလည်လောက်ပဲ သွားမှာပါ။
အထက်ကပြောတဲ့ ထန်းလျှက်ခဲပဲ စားဖူးတဲ့လူတွေအကြောင်းကို ပြောချင်သေးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ချောကလတ်မစားဘူးတဲ့ လူတွေရှိတယ်။ ဆိုလိုချက်က နိုင်ငံခြားရဲ ့အရသာကိုမခံစားဘူးတဲ့လူတွေပါ။ လက်တွေ ့ကြကြနှစ်ပေါင်းများစွာ မနေဘူးတဲ့လူတွေကို ပြောတာပါ။ ဒီလူတွေကတော့ ပြောမှာပေါ့…နိုင်ငံခြားကကောင်တွေ ဖင်ခေါင်ကျယ်တယ်လို ့။
ကျနော်တို ့မကျယ်ပါဘူးဗျာ။ ခင်ဗျားတို ့မှ ချောကလတ်ကောင်းကြောင်း မသိတာကိုးလို ့ပဲပြောရမှာပဲ။
လူ ့သဘာဆိုတာက အရမ်းကိုသာနေတဲ့ဘဝမှာ အနေကြာလာရင် အလိုလိုအကျင့်ပါလာတယ်ဆိုတာကို ပြောချင်လို ့ပါဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ချောကလတ်မစားဘူးတဲ့လူတွေ အမြင်ကြည်လင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားလို ့ကိုမရဘူးဖြစ်နေတယ်။
သဘောတူတူ မတူတူ ပြောကြည့်တာပါ။
တိုင်းမဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ကို အဖေကမှာယူပြီး၊စာဖတ်တတ်တဲ့အရွယ်ကတည်းကစပြီးစာဖတ်လာသူမို ့..
တံခါးပိတ်ဝါဒနဲ ့စိုးမိုးဗိုလ်ကျခဲ့တဲ့ဗိုလ်နေဝင်းတို ့ကိုလည်းအသေမုံးခဲ့တဲ့သူပါ..။
လူဆိုတာ ပျော်ရာမှာမနေ တော်ရာမှာနေ လို့ဆိုဆုံးမ စကားရှိပေမယ့်လည်း
တစ်ကယ်တမ်း လက်တွေ ့မှာ တော်ရာ မတော်ရာ ထက် ၊ ကိုယ်ပျော်တဲ့နေရာမှာ နေနိုင်ဖို ့ကိုဘဲ ဦးစားပေးကြတာပါဘဲ ။
စာအုပ်ထဲမှာရေးထားတဲ့ ချောကလတ်အရသာကို လက်တွေ ့ခဏခဏ စားဘူးမှ အရသာကို ပိုသိမယ်။ အဲဒါကိုဘိုဆိုရင် Experience လို ့ခေါ်တယ်။
ချောကလက်က ကောင်းတယ်ဆိုတာ သိတယ်…
ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ ချောကလက်ကိုပဲ စွဲမက်မယ်ဆိုရင်…
ထန်လျက်ခဲ ရှိမယ့်နေရာမှာ မနေသင့်ဘူးပေါ့ …
မြန်မာပြည်သားတစ်ယေက်ြဖြစ်တယ်ဆိုရင် ထန်လျက်ခဲ အရသာကို မမေ့သင့်ပါ ……
ခင်များဘဲ ဆက်စားပါဗျာ။ကျုပ်တို ့ဘဲ ပုန်းရည်ကြီးနဲ ့စားစား၊ငပိနဲ ့စားစား
ခင်များတို ့လို အမေကျော် ဒွေးတော်တော့ မလွမ်းပါဘူး။ဒါဗြဲ။
စာကို သေသေချာချာ ဖတ်ပြီးမှ မန့်ပါလေ ။
အမေကျော်ပြီး ဒွေးတော်မလွမ်းချင်ပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေနဲ ့ကျနော်က တွေ ့ချင်နေတာ။ ခင်ဗျားလိုလူမျိူးတွေ နိုင်ငံခြားသာ သွားခွင့်ပေးရင် တားလို ့တောင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပေါ့ဗျာ။ ရှက်စရာမှ မဟုတ်တာ။
ခင်များတို ့လို နိုင်ငံရေးဗန်းပြလုပ်ပြီး ပြည်ပြေးသွားရတဲ့ ငနဲအဖြစ်နဲ ့
ဘယ်တူပေါ့မလဲ။သွားချင်ရင် အနောက်နဲ ့အရှေ ့အိမ်ဦး ကြမ်းပြင် သွား
နိုင်တယ်။နိုင်ငံရေးသမားလိုလို ဘာလိုလိုနဲ ့ခုတုံးလုပ် ကောင်းစားနေတဲ့
ခင်များတို ့လို လူတွေကြောင့် လူကောင်းတွေပါ ရောအပြောခံနေရတယ်။
မြန်မာပြည်ကို ချစ်တယ်ဆိုတာတော့ ဟုတ်ပါရဲ့… သို့သော်လည်း ဝါးလုံးခေါင်းထဲက ထွက်ကြည့်ကြစေလိုပါတယ်… ပြင်ပကမ္ဘာမှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ၊ သူများလူမျိုးတွေ ဘာတွေလုပ်နေကြလဲ၊ သူတို့လူမျိုးတွေ ဘယ်လိုနေထိုင်ကြလဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင်လေ့လာ၊ ခံစားသိရှိပြီးမှ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုလည်း ဒီလိုဖြစ်စေချင်လိုက်တာဆိုတဲ့ စိတ်လေး ဖြစ်လာမယ်.. အဲဒီစိတ်လေးပေါ်မူတည်ပြီး ကိုယ့်လိုပဲ တစ်ခြားသူတွေကိုလဲ ခံစားစေချင်လာမယ်.. အဲလိုခံစားမိလာရင် သူများတွေဆီက အတုယူသင့်တာယူပြီး တစ်ခုခုတော့ ပြန်လုပ်ပေးဖြစ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်..
ဒါကိုပြည်တွင်းမှာသာ လုံးလုံးလျားလျားနေနေသူတွေအဖို့ ကိုယ်ကျင်လည်ရာမှာကိုယ်မွေ့လျော်နေတာနဲ့ ဘာလုပ်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသိတာကတစ်ကြောင်း၊ သူများနိုင်ငံတွေမှာ တိုးတက်နေတာကိုပြောရင် အမေကျော် ဒွေးတော်လွမ်းတယ်လို့ သမုတ်တာ အရိုးခံဖြစ်နေတာတစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်္ဂလိပ်စကားပြောရင် ဘိုရူးလို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့အတွက် ရှက်ကြောက်နေခဲ့ကြတဲ့ လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ ရှေးရိုးစွဲ အစဉ်အလာ အကျင့်ဟောင်းတွေကို မပြင်ဆင်လိုကြတာကတစ်ကြောင်းကြောင့် နိုင်ငံတိုးတက်သင့်သလောက် မတိုးတက်ဘူးထင်ပါတယ်။
ယနေ့တရုတ်နိုင်ငံတိုးတက်လာတယ်ဆိုတာ သူတို့ဆီက မျိုးဆက်တစ်ဆက်စာ တစ်မြေရပ်ခြားမှာ သွားရောက်နေထိုင်၊ လေ့လာသင်ယူခဲ့ကြလို့ဆိုတာ သတိရစေချင်ပါကြောင်း…
အနားယူတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကိုယ့်နေရပ်ဌာနေမှာဘဲ
ပါတ်ဝန်းကျင် ယဉ်ကျေးမှု့ လူမှု့ဆက်ဆံရေး က
သူတို့ဆီက လူငယ်တွေ ၁၈နှစ်ပြည့်လာယင်..
သားသမီးတွေ အရွယ်ရလာတော့လဲ သူတို့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိသလို့
သူတို့ယဉ်ကျေးမှု့နဲ့လူမှု့ဆက်ဆံရေးကို မိဘတွေကလဲ ကျေနပ်လက်ခံကြတာမို့လား…
အရီး ။ ။”ဒါကို တော့ အရီးလဲ ကန့်ကွက်ပါတယ်။ပြောချင်ရင် စာရေးသူ ကို ဘဲ ပြောပါ။
မဆိုင်တဲ့ သမီးလေးတွေကို ဒီမှာ ဆွဲမထည့်ပါနဲ့။သူတို့ နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး။
အနောက်နိုင်ငံ တွေ မှာလဲ သူ့ဟာသူ စည်းကမ်းထားတဲ့ မိဘ တွေ လဲ ရှိပါတယ်။
လူတိုင်း အားလုံး တစ်ပုံစံထဲ တော့ မဟုတ်ပါဘူး။”
စာရေးသူ ဘာကို ဆိုလိုတာလည်းဆိုတဲ့ အချက်ကို နားမလည်လို ့ဒီစကားတွေထွက်လာတယ်ထင်တယ်။ မပူနဲ ့…ကျနော့်က ဒါမျိူးတွေနားလည်ပြီးသားဗျ။ နားလည်တော့ ရှောင်ရတိမ်းရလွယ်တယ်။ နားမလည်တဲ့ခင်ဗျားတို ့လို လူမျိူးတွေသာ သတိထားပါ။ ကိုယ့်သမီးဗိုက်ထွက်မှ ယူလိုက်ရတာမျိူးတော့ မဖြစ်စေနဲ ့ဗျာ။ စာရေးသူကို ချဖို ့လောက်ပဲ မစဉ်းစားနဲ ့ကိုရင်မောင်။ သေသေချာချာလေ့လာပြီးမှ ကွန်းမန် ့ပေးပါလားဗျာ။ တော့တော့ကို အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့စကားဖြစ်နေပြီ။ စကားမစပ်…ရှူံးနှိမ့်မှု ့များနဲ ့လူကွန်းမန်ကိုတော့ အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။
(…ကျနော့်က ဒါမျိူးတွေနားလည်ပြီးသားဗျ။ နားလည်တော့ ရှောင်ရတိမ်းရလွယ်တယ်…)
သများတို့ကတော့ ငပိနဲ့ တို့စရာ ၊ ရေနွေးကြမ်းလေးနဲ့ ထန်းလျှက်ခဲ လောက်ပဲသိတာတော့
ရှင်ကြီးပြောတဲ့ ချောကလက်ဆိုတာဂျီး စားဖူးချင်လိုက်တာတော်
အရေးကြီးတာက မြန်မာပြည်မှာနေရင်း ချောကလက်စားချင်ရင်လည်းစား၊ ငပိလေးစားချင်တဲ့ အခါလည်းစားလို့ရနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သူများနိုင်ငံမှာ ချောကလက်စားနေနိုင်ရုံ အဆင့်နဲ့လောက်ရပ်မနေသင့်ပါခင်ဗျ။
ဟဲဟဲ ဒီ Comment လေးကတော့ ၊
မြန်မာပြည်ထဲမှာနေပြီး ချောကလက်ကော ထန်းလျက်ပါ စားနိုင်နေတဲ့ ၊
ကံထူးသူ တစ်ယောက်ရဲ့ Comment ဖြစ်ရမယ် ။
တစ်ခုလောက်တော့ ပြောပါရစေ ၊
ဘယ်လောက်ပဲ ချမ်းသာပါစေ ၊
မြန်မာပြည်ထဲမှာနေရင် တချို့ အားနည်းချက်တွေကို ရှောင်ရခက်တယ်ဗျ ။
ဥပမာ ။ ။ ပဲပင်ပေါက်ကို ထွားအောင် ဟိုမုန်းဆေး ဖျန်းတယ်တဲ့ ။
အဘ မြန်မာပြည် ရောက်တုန်း ၊
ပဲပင်ပေါက် စားခါနီးတိုင်း စိတ်ပူခဲ့ရတယ် ။
က ဘုန်းကျော်ဒါဆိုရင် ခင်ဗျားက
“ဇီးသီးသည် ဘုန်းကျော် ”ပဲဖြစ်ရမယ်၊၊
ကိုဘုန်းကျော် အခု မြန်မာပြည်ကလူတွေ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ချောကလက်ကြိုက်တဲ့လူ ချောကလက်စားပြီး၊ ထန်းလျက်ကြိုက်တဲ့လူ ထန်းလျက်စားပြီးနေနိုင်အောင်လို့ အားလုံးဝိုင်းကြိုးစားနေကြတယ်။ အဲဒီလို အဆင်ပြေတဲ့ အခါ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာပြီး ချောကလက်စားနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ တန်ဆေး လွန်ဘေးတော့ ရှိတာပေါ့။
လူကလေး ကဘုန်းကျော် မှန်ပေ၏။ ချောကလက်မစားဘူးတော့ ဘယ်မှာ ချောကလက်အရသာကို သိမလဲနော့။
မြန်မာပြည်ကိုဆို ခင်ညားတို့ ကနှိမ်ကိုနှိမ်နိုင်လွန်းပါတယ်။ ခင်ညားတို့လိုလူတွေပဲ ကျွန်ုပ်တို့ဆီကို “ရွာ” လို့လဲခေါ်ကြသေးတယ်မလား။ (မြန်မာကို ရွာလို့ခေါ်တဲ့သူတွေကိုလဲ သတိပေးအရေးယူတော့မယ်တဲ့ သတိထားနေအုန်း)။ အခု မီးလဲမှန်နေပါပြီဂျ (မပျက်တဲ့အချိန်ဆို)။ ခြင်လဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုက်တယ်လို့ ဘူပြောလဲ ခြင်ထောင် နဲ့အိပ်ပါလား ဘယ်မှာကိုက်လို့တုန်း :-)
သူတို ့ကို နှိမ်တယ်လို ့ထင်တာကိုး။ မတတ်နိုင်ပါ။ သူတို ့…..တနေ ့တော့ နားလည်လာမှာပါ။
သူတို ့တွေ နားမလည်ကြလို့စေတနာကို မသိကြတာပါ..
နားမလည်တဲ့လူတွေကို နားလည်သွားအောင် ဂျွမ်းသုံးပတ်စီလောက် ထိုးခိုင်းလိုက်ပါ လို့..ဆရာဖုန်းကျော်ကို အကျန်ပေးပါရစေခင်ဗျား..
ကျနော်ဖင်ခေါင်းကျယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ..တဲ့။
ဟုတ်…ဟုတ်…ဟုတ်ကဲ ့…ခင်ည ။
ခင်များတို ့လို လူတွေကြောင့် လူကောင်းတွေပါ ရောအပြောခံနေရတယ်။……….
ကဖုန်းကျော်..ခင်ဗျားနဲ့ ကျနော်နဲ့ အသက်ချင်းတော့ သိပ်မကွာဘူး… နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်ရှိတာချင်းလဲတူတယ်..။ တစ်ခုပြောမယ် နိုင်ငံရေးလုပ်ချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရင် ပြည်တွင်းမှာလုပ်တာပိုပြီးထိရောက်တယ်..(တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအပေါ် တကယ် စေတနာမှန်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ ) ။ ဘာမှမလုပ်နိုင်ရင်တောင် ဆင်းရဲချို့တဲ့ ကူညီမဲ့နေတဲ့ ပြည်သူတစ်ယောက်လောက်ကို ဒီမှာနေပြီး ကူညီလိုက်တာပိုအကျိုးရှိတယ်။(ပြန်လာခွင့်မရှိရင်လဲ အကျိုးပြု ကိစ္စတစ်ခုကို လှမ်းပြီးလုပ်လို့ရတာပဲနော)။ ဒါလဲ နိုင်ငံရေးပဲဗျ။ ခင်ဗျားတို့က နိုင်ငံရေး လုပ်တာမဟုတ်ဘူး..လုပ်စားသွားတာ. ။ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းနဲ့ နိုင်ငံခြားရောက်ပြီး ရပ်တည်နေတာမဟုတ်ဘူး.. ။ ထောက်ပံ့ခံဘဝနဲ့နေပြီးမှ ဒီလိုရပ်တည်နိုင်လို့ စကားအကြီးကြီးတွေ သိပ်မပြောနဲ့လေဗျ..။ AB လဲသိတယ်…လူဘောင်သစ်ရောသိတ.်။ ဘယ်သူတွေ ဘာတွေလုပ်စားသွားလဲဆိုတာသိသလို ခင်ဗျားရော ၊ပတ်သတ်ယှတ်စပ်တွေရော.. ကျနော်သိတဲ့သူတွေ များတယ် ကဖုန်းကျော်ရေ..။ တိုင်းပြည်အတွက်၊ လူမျိုးအတွက်ဆိုပြီး ထွက်သွားပြီးမှ အားမပေးတဲ့အပြင် ကြွားလုံးတွေများလာတော့ ..တကယ် ဝမ်းနည်းပါအိ..။
ကဖုန်းကျော်..ခင်ဗျားနဲ့ ကျနော်နဲ့ အသက်ချင်းတော့ သိပ်မကွာဘူး… နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်ရှိတာချင်းလဲတူတယ်..။ တစ်ခုပြောမယ် နိုင်ငံရေးလုပ်ချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရင် ပြည်တွင်းမှာလုပ်တာပိုပြီးထိရောက်တယ်..(တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအပေါ် တကယ် စေတနာမှန်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ ) ။ ဘာမှမလုပ်နိုင်ရင်တောင် ဆင်းရဲချို့တဲ့ ကူညီမဲ့နေတဲ့ ပြည်သူတစ်ယောက်လောက်ကို ဒီမှာနေပြီး ကူညီလိုက်တာပိုအကျိုးရှိတယ်။(ပြန်လာခွင့်မရှိရင်လဲ အကျိုးပြု ကိစ္စတစ်ခုကို လှမ်းပြီးလုပ်လို့ရတာပဲနော)။ ဒါလဲ နိုင်ငံရေးပဲဗျ။ ခင်ဗျားတို့က နိုင်ငံရေး လုပ်တာမဟုတ်ဘူး..လုပ်စားသွားတာ. ။ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းနဲ့ နိုင်ငံခြားရောက်ပြီး ရပ်တည်နေတာမဟုတ်ဘူး.. ။ ထောက်ပံ့ခံဘဝနဲ့နေပြီးမှ ဒီလိုရပ်တည်နိုင်လို့ စကားအကြီးကြီးတွေ သိပ်မပြောနဲ့လေဗျ..(ဘဝတော့ သိပ်မမေ့နဲ့) ။ ဘယ်သူတွေ ဘာတွေလုပ်စားသွားလဲဆိုတာသိသလို ခင်ဗျားလဲ သိသလို ကျနော်လဲ သိတယ် ၊ပတ်သတ်ယှတ်စပ်တွေရောပေါ့ .. ကျနော်သိတဲ့သူတွေ များတယ် ကဖုန်းကျော်ရေ..။ တိုင်းပြည်အတွက်၊ လူမျိုးအတွက်ဆိုပြီး ထွက်သွားပြီးမှ အားမပေးတဲ့အပြင် ကြွားလုံးတွေများလာတော့ ..တကယ် ဝမ်းနည်းပါအိ..။
ရွှီးပြန်ပြီ။ ဒါကတော့ ခင်ဗျားအမြင်ပဲ။ ခင်ဗျား ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကို တချက်လောက် ပြောပြပါအုံး။ သက်သေအထောက်အထားနဲ ့ကြည့်ချင်ပါတယ်။ လေးစားသင့်ရင် လေးစားလို ့ရအောင်ပါ။ ပြည်တွင်းပြန်ပြီးနိုင်ငံရေးလုပ်ဖို ့အတွက်ကို မျှော်လင့်နေတာကြာပါပြီ။ ကိုမင်းကိုနိုင်တို ့အဖွဲ ့လို ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ကျောင်းသားနိုင်ငံရေးကို စိတ်ကုန်နေတဲ့ ဘုန်းကျော်ပါ။ ပြည်ပကနေ ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုလည်း လေ့လာပါအုံး။ ခင်ဗျားပဲ မှန်တယ်လို ့တော့မထင်နဲ ့ဆရာ။ ထောင်ကျခံပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့လူတွေကို အထင်မကြီးတော့ပါ။
ကဖုန်းကျော် ပို့စ် ရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုတော့သေချာသိတယ်..။ တောမှာမွေးပြီး ရန်ကုန်မှာ ရပ်တည်တဲ့သူတစ်ယောက် တောကိုပြန်ရင် တစ်ခုခုကို ပျင်းပြီး ဟာတာတာ ဖြစ်နေသလိုခံစားချက်ကိုနာ;လည်ပေမယ့် ကွန်မန့်တွေမှာ အရမ်းဖောင်းနေသလို့ပဲလို ထင်မိတယ်။ မနှိမ်ပါနဲ့..ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့မှ မနိမ်တာ လူယဉ်ကျေးစရိုတ်ပါ..။
ပြောတာတွေလွန်တာပါသွားရင် sorry ကဖုန်းကျော်..။
ဟေ့လူ.. Bloody ဘုန်းကျော်.. ခင်ဗျားအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ.. retired နီးပြီလား… retire ရောက်တော့မှ ခင်ဗျား နောင်တတွေ တလှေကြီးနဲ့ သေဖို့ရက်ကို ဘီယာသောက်ပြီး မျှော်နေရမယ်နော်… ခင်ဗျား က ဥပဒေအရ အော်ဇီ နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီဆိုပြီး အရမ်းကို ဂုဏ်တက်နေတယ်ထင်ပါ့…။ အဲဒီမှာ ရှိတဲ့ အဖြူကောင်တွေကို မေးကြည့်ပါ ခင်ဗျားတို့ကို လူလို့ကော သတ်မှတ်ရဲ့လားလို့…။ ကျုပ်ကတော့ အချိန်တန်ရင် အမိမြေ(သို့) အဖမြေကိုပဲ ပြန်တော့မည်..။ သိပ်မကြွားနဲ့ကွာ .. လခွီး.. ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းရှိလို့ ရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ မပြောလိုဘူး…။
အဲဒီက နိုင်ငံသား ဖြစ်ဖို့ ဖြေခဲ့တဲ့ interview တွေ…၊ စာမေးပွဲတွေအကြောင်း ပြောပြပါလား… ။ အော်ဇီအစိုးရကို ဘယ်လို လိမ်လည်ခဲ့တယ်ဆိုတာလည်း ပါပေ့စေနော်…။
ထန်းလျှက်က.. ထန်းပင်ကထရေကို..ကြိုချက်ပြီး.. ထုတ်လုပ်တာလို့.. သိထားတယ်..။
(ဒီခေတ်တော့.. အချိုကဲအောင်..အရွယ်ကြီးအောင်.. ဆေးသကြားနဲ့.. ဖိုင်ဘာတခုခု ခိုးထည့်မလားပါပဲ..။)
အရောင်ချွတ်ဆေးတောင်မှ.. လူနဲ့တည့်တဲ့.. အရောင်ချွတ်ဆေးတော့မဟုတ်.. စက်မှုသုံးဆေးမျိုးထည့်မှာလို့.. သေချာမိတယ်..။
အဲ..ထန်းလျှက်ကြိုရာမှာလည်း.. ထင်းမီးသုံးကြမှာက.. ၉၉ရာခိုင်နှုန်းလို့သေချာမိတယ်..။
ထင်းမီးအတွက်.. ထင်းခုတ်တော့.. တောပြုန်းတာပေ့ါ..
အခုမြင်ကြရတဲ့.. ငွေရောင်ရွှေရောင်.. အပူကာဖွိုင်အောက်က.. ချောကလက်တုံးလှလှကလေးဟာ.. လွယ်လွယ်ဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်..
ဒီလိုချောကလက်လေးတတောင့်.. လူတယောက်စားရဖို့လမ်းမှာ.. အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းတွေ.. နည်းပညာတွေ.. ကျမ်းမာရေးလိုက်လျှောညီထွေမှုတွေ.. ပရောဖက်ရှင်နယ်တွေ.. ထောင်သောင်းချီရင်းနှီးထားရတာဖြစ်ပါတယ်..
ထန်းလျှက်ချစ်သူတွေ.. ထန်းလျှက်စားသူတွေ.. ထန်းလျှက်ကို.. ချောကလက်လို ကမ္ဘာတန်းရောက်အောင်.. တွန်းပို့ထီထွင်.. လမ်းကြောင်းပေးနိုင်ကြမယ့်နေ့.. ဖြစ်အောင်လုပ်ကြစေလိုကြောင်း…
ရှေးသချ်ာမတတ်တဲ့ခေတ်က.. အတွေးအခေါ်တွေနဲ့.. လုပ်ထုံးတွေကဖောက်ထွက်..တွေးကြ..လုပ်ကြ..ကျင့်ကြစေလိုကြောင်း…
you can read my history on my blog. If you not sure, aske me again!!!
မျက်မမြင် ပုဏ္ဍား တွေ ဆင် ကို စမ်းပြီး ကိုယ်ခံစား ရတာ ကို ပြောပြကြတဲ့ ပုံပြင်လေး ကြားဘူး မှာပေါ့။
ရှင်ဘာ ကို ဆိုလို တယ် ဆိုတာ ရှင်စမ်းထားတဲ့ အပိုင်းအရ မှန်ပေမဲ့ ကျန်တဲ့ အပိုင်းကို စမ်းမိ တဲ့ သူတွေ အတွက် ကတော့ ခံစားလို့ ရမှာမဟုတ်ဘူး။
ဒီတော့ ရှင့်ခံစားချက် က အားလုံး အတွက် ခြုံ ငုံ နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မြန်မာပြည်တွင်းမှာ အရမ်းတော် တယ် ခေါ်လို့ ရတဲ့ ဆရာတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိတယ်။
ဆရာ တစ်ယောက် ဆိုရင် ဟိုးအရင်ကထဲက နိုင်ငံခြား က အဖွဲ့အစည်း တွေက သူတို့ဆီမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ လစာကောင်းကောင်း ပေးပြီး ခေါ်တာ။
ဟိုမှာ အလုပ်လုပ် ရင် စိတ်လဲမပင်ပန်းဘူး။ ဘယ်သူ့ မှလဲ ဖားစရာမလိုဘူး။ ပိုက်ဆံ က သူ မြန်မာပြည်မှာ လုပ် လို့ ရတာထက် ပိုကောင်းပေါ့။
ဒါပေမဲ့ သူ မသွားဘူး။
သူ့မှာ စားဖို့၊ နေဖို့ နဲ့ သားသမီးတွေ ကျောင်းစရိတ် ရရင် ဘဲ တော်ပြီ ဆိုပြီး ပြည်တွင်း မှာဘဲ လုပ်တယ်။
သူ့ပညာ ဟာ သူ့တိုင်းပြည် နဲ့ သူ့လူမျိုး အတွက် ဘဲ ဖြစ်ချင်သတဲ့။
သူ့အပြင် တစ်ခြား အခွင့် ရ နဲ့ နိုင်ငံခြား မထွက် ဘဲ ပြည်တွင်းမှာ စာသင်ရင်း မြန်မာပြည် အုပ်ချုပ်သူ တွေ နဲ့ အုပ်ချုပ်ပုံ တွေ အကြောင်း ဝေဖန်လွန်းလို့ ရာထူးမတက်၊ သတိပေးတာ ခဏ၊ ခဏ ခံနေ ရတဲ့ Research တွေမှာ အရမ်းတော်တဲ့ ဆရာလဲ ရှိတယ်။
Research ဆိုတာက နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေ မှာ အရမ်း တန်ဖိုးထားသလောက် မြန်မာပြည် မှာ ချောင်ထိုး ထားခံတဲ့ အရာတစ်ခုပေါ့။
အမှန်အကန် အချက်အလက်တွေ က ရလာ မဲ့ အစီရင်ခံစာ တွေကို ကြောက်သကိုး။
ဒါ က အနီးကပ် နေ ခဲ့ ရတဲ့ ဆရာတွေ။ အများကြီး ရှိသေးတယ်။
သူတို့ က နိုင်ငံခြား က ဘွဲ့ ၊ ဒီဂရီ ရလာပြီးသူတွေနော်။
သူတို့ ဟာ ပြည်ပနိုင်ငံတွေ က ဘယ်လို သွေးဆောင်ခေါ်ခေါ် တိုင်းပြည်ချစ်စိတ် နဲ့ မသွားခဲ့တာ။
သူတို့ တန်ဖိုး ကို အရေးမထားဘဲ ဖိနှိပ်ထားတဲ့ စစ်ဖိနပ် အောက်မှာ သူတို့ချစ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေ အတွက် အနာခံ နေခဲ့ကြတာ။
နောက် ရွယ်တူ သူငယ်ချင်းတွေ မှာလဲ နိုင်ငံခြားမှာ အဆင့်ပညာ နဲ့ လုပ်စားလို့ ရပါလျှက် နဲ့ ကိုယ့်ပြည်မှာဘဲ ကြိုးစားနေသူတွေ အများကြီးပါ။
မြန်မာပြည်ထဲ မှာ နေတိုင်း နိုင်ငံခြား ကို မထွက်ရဲလို့၊ မထွက်နိုင်လို့၊ အရည်အချင်းမမှီ လို့ မဟုတ်ပါဘူး။
သူတို့ ရည်မှန်းချက် နဲ့ သူတို့ ယုံကြည်ချက် နဲ့ပါဘဲ။
ရှင့် စကား တွေ က ဒီလို လူတွေ ကို အင်မတန် အားနာဖို့ကောင်းပါတယ်။
ရှင်ပြောသလို ပြည်ပကို ထွက်ချင်ရက် နဲ့ မထွက်ရဲသူတွေ၊ အဆင်မပြေလို့ မထွက် ရသူတွေ လဲ ရှိပါတယ်။
ရှင့် စကား တွေ က ဒီလို လူတွေ ကို တော့ သက်သက် ရန်စ သလို ဖြစ်ပါတယ်။
နောက် ပြည်ပ မှာလဲ တစ်ချို့ သူတွေ က ကိုယ့်တိုင်းကိုယ့်ပြည် ပြန်ဖို့မစဉ်းစားကြတော့တဲ့ သူတွေ ရှိသလို အသက်ကြီးချိန် ကိုယ့်ပြည်ကိုယ့်ရွာ မှာ ခေါင်းချ ဖို့ စီမံ ထားသူတွေ လဲ ရှိပါတယ်။
ဒီတော့ ကိုယ်ပြောတဲ့ စကားဟာ ကိုယ့်ရှုဒေါင့် က ကြည့်ရင် မှန်ပေမဲ့ တစ်ခြားရှုဒေါင့် ကဆို မမှန်နိုင်တာကို လဲ စဉ်းစားရပါတယ်။
ရှင့် အတွေ့အကြုံ နဲ့ ကိုယ်ပိုင် ခံစားချက်ကို ပြောလို့ ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အားလုံးဟာ ရှင့်အတိုင်း မဟုတ်နိုင်ဘူး ဆိုတာလေး တော့ သတိထားပါ။
အမှန်ပြောရရင် ကျွန်မလဲ ကျွန်မချစ်တဲ့ တိုင်းပြည် က လူတွေ အားလုံး ကို ပြည်ပမှာ ကျွန်မ မြည်းစမ်းပြီး နှစ်သက် နေတာလေးတွေ ကို အမြဲ မြည်းစမ်း စေချင်ပါတယ်။
ဒါဟာ တကဲ့ ရင်ထဲက စေတနာပါ။
ပြည်သူ တွေ အတွက် တရားဥပဒေ ကောင်းကောင်း နဲ့ အကာအကွယ် ပေးထားခံရတဲ့ အရသာ
ပြည်သူများက သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကို သူတို့ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ အရသာ
ဘယ်ဘာသာ ကိုးကွယ် ကိုးကွယ်၊ ဆင်းရဲရဲ၊ ချမ်းသာသာ၊ ဘယ်လိုအသား အရောင် ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျားမ မခွဲ၊ သန်စွမ်းခြင်း ရှိမရှိ မရွေး၊ လူတိုင်း တန်းတူညီမျှရှိနေတဲ့ အရသာ
လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ “ခံစားချက်တွေ ၊ မျှော်လင့် ချက်တွေ၊ အိမ်မက်တွေ” ကို လွတ်လပ်စွာထားရှိ နိုင်တဲ့ အရသာ
တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို မထိခိုက်၊အန္တရာယ် မပေးခဲ့လျှင် ကိုယ်ကြိုက်ရာ အလုပ်ကို လုပ်နိုင်ခွင့် ရှိတဲ့ အရသာ
“ဥပဒေ၏ အထက်တွင် မည်သူ မှမရှိ” ဆိုတဲ့ စကားကို တကယ်ဘဲ ယုံကြည်နေနိုင်တဲ့ အရသာ
ဥပဒေ ပြုသူများ နဲ့ စီမံခန့်ခွဲသူ တွေ ကို လူတိုင်းမှ မဲပေး၍ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ရှိတဲ့ အရသာ
စစ်တပ်က ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အမိန့်ကို လိုက်နာ တဲ့ အရသာ
ပြည်သူအများလိုက်နာရမည့် ဥပဒေတွေကို ပြည်သူများကသာ ပြဌာန်းတဲ့ အရသာ
စီမံခန့်ခွဲသူများက ဥပဒေနှင့်အညီ သာ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အရသာ
အဲဒါတွေ ကိုတော့ သူတို့ ကို တကယ်ဘဲ စားသုံး နိုင်တဲ့ အခြေအနေကို အမြန်ရောက်စေချင် စမ်းပါတယ်။
အကောင်းမြင်ကြည့်ရရင်တော့ မကြာလောက် တော့ဘူး ထင်ပါရဲ့။
အဲဒီ အချိန်အတွက် ပန်းကန် တွေ၊ ဇွန်းတွေ အသင့်ပြင်ထားကြဖို့တော့ လိုမယ်။
ရှင့် အတွေး တစ်ချို့ကတော့ ဖတ်လို့ ကောင်းပါတယ်။
အတွေးဆန်းများ ကို အစ်မ တို့ ဆက်မျှော်နေပါတယ်။ :-)
ယူနီဗာဆယ် ဗားရှင်း တော့ မလုပ်နဲ့ပေါ့ရှင်။ ;-)
အဲလိုလူမျိူးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ပါတယ်။ မသိလို ့မဟုတ်ပါ။ သို ့သော် နိုင်ငံခြားက လူတွေကိုတော့ သိတ်ပြီး မကဲ့ရဲ ့နဲ ့ပေါ့ဗျာ။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ပြည်တွင်းက လူတွေက နိုင်ငံခြားက လူတွေကို ကြွေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို ့ပဲ ကျွေးနေပေးနေရတာကို နားလည်ကြပါ။ သဘောမတူတာ ရှိတာနဲ ့ဝိုင်းပြီးတွယ်လိုက်မယ်ဆိုတာကတော့ အဆင့်အတန်းနိမ့်တဲ့လူတွေရဲ ့အလုပ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က ပညာမဲ့တဲ့ကုလားတွေဟာ သူတို ့လိုချင်တဲ့မိန်းမကို မရရင် မျက်နှာကို အက်ဆစ်နဲ ့ပက်တယ်လို ့သိရတယ်။ အားလုံးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုယဉ်ကျေးမှု ့အဆင့်အတန်းမျိူး မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကွန်းမန် ့ပေးတဲ့သူတွေသတိထားပါလို ့ပါပြောချင်ပါတယ်…ဒေါ်ခင်လတ်။
ဘယ်လိုလူ လည်းဗျ ! စိတ်ထဲ မြင်ကြည့်တယ် ! မဲ့ကာ ရွဲ့ကာ ပြောနေမဲ့ ပုံကြီး ! ဘာကြီးနဲ့ တူမှာပါလိမ့်?
ဒါကို တော့ အရီးလဲ ကန့်ကွက်ပါတယ်။
ပြောချင်ရင် စာရေးသူ ကို ဘဲ ပြောပါ။
မဆိုင်တဲ့ သမီးလေးတွေကို ဒီမှာ ဆွဲမထည့်ပါနဲ့။
သူတို့ နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး။
လူတိုင်း အားလုံး တစ်ပုံစံထဲ တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘာဖြစ်လို ့အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကျနော့်သမီးလေးတွေကို ထိပါးနေတာလဲ။ အခုကိစ္စက ကျနော့်ကိစ္စ။ ဒီတော့ ခင်ဗျားတို့မဆိုင်တဲ့သူတွေကို ဆွဲ မထည့်နဲ ့။ တော်တော့်ကို မိုက်ရိုင်းပါလား။
ကိုဘုန်းကျော် ! မန့်တဲ့လူကိုပြောတာဗျ ! သူတို့ နိုင်ကွက်က အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးငယ်ကိုပဲ ဆွဲထဲ့ပြောနေတာ ! မိန်းမ ဆန်လို့ ဘာကြီးနဲ့တူမှာပါလိမ့်တွေးနေတာ ။ အခြောက်ကြီး ဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာ!
ကျွန်တော်ဝင်မမန့်တာကြာပြီ ! ခုဟာက ခင်ဗျား ပို့( စ ) တွေမှာ အမြင်မတူ သူအချို့ဟာ ဘာမှမဆိုင်တဲ့ ဒီကလေးငယ်ကိုပဲ ထည့်ထည့်ပြောနေတာ ! တင်းလာတာနဲ့ ဝင်မန့်လိုက်တာ ! ပထမ အဲဒီ လူ ဆဲပီးမန့်တာ ။ နောက်မကောင်းတာနဲ့ ဖျက်လိုက်တယ် ။ ခုတော့ မထူးပါဘူးလေ ။ တလက်စတည်း အဲဒီလိုကောင်တွေဆဲလိုက်မယ် ။လီးပဲကွာ !
Good Ko Ye Yint Hlaing!!!!!!!!!!!
ခင်ဗျားပို(စ်)ကိုခုမှဖတ်မိတယ် ကိုဘုန်းကျော် မှန်ပါတယ် ခင်ဗျား အတွေးကိုထောက်ခံပါတယ်။
ခက်တာက ကွန်ဆာဗေးတစ်အုပ်စုကြီးက တစ်ခါလာ ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခါလာ ယဉ်ကျေးမှုဆို
တာကြီးနဲ. တိုင်းပြည်ကိုဆွဲဆွဲချနေတာ မဆလ ခေတ်ထဲကနေ အခုအချိန်အထိပဲလေ။
ပီးတော့ ဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့တဲ့စကား ကျုပ်တို.ဗမာလူမျိုးတွေမှာမစ္ဆရိယစိတ်သိပ်များတယ်ဆိုတာ
အမှန်ပဲ။တရုပ် ကုလားတွေဗမာပြည်ထဲမှာတူတူနေပီး ဘာကြောင့်ကြီးပွားတိုးတတ်ချမ်းသာကုန်
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါ ကိုယ်ရဲ.စိတ်ဓာတ်တွေ စောက်ကျင့်တွေက ကောင်းမှ မကောင်းတာကိုး။
တဆိပ်ရှိနိုင်ငံခြားကလူတွေပဲအထင်ကြီးတယ် ကိုယ်နိုင်ငံကိုကြတော့နှိမ်တယ်ဆိုတာ ဟိုး
ဘိုးတော်ဘုရားခေတ်က တော်ကီတွေ အတွေးအခေါ်တွေပါ။သူတို.နိုင်ငံရဲ.စနစ်တွေ လူတွေရဲ.
စိတ်ဓာတ်တွေက ကိုယ်တွေဆီက လူတွေထက် စိတ်ဓာတ်ပိုင်းရော နည်းပညာရော စနစ်တွေရော
သာနေလို. ကိုယ်တွေ.ကြုံဖူးတဲ့လူကပြောပြနေတာလေ။ခက်တော့ခက်အုန်းမှာပါ ကျုပ်တို.နိုင်ငံက
LDC နိုင်ငံ နိုင်ငံတကာမှာ ဘောင်မဝင်တဲ့နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားသာွးရင် လူစောက်ထင်သေးခံရတဲ့နိုင်ငံဘဝကနေဘယ်တော့မှကျွတ်မှာ မဟုတ်ဖူး
မှန်တာပေါ့ဗျာ။ အရမ်းဆင်းရဲတော့ အကျင့်သီလနဲ ့အုံးနှောက်ကလည်း အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာမျိူးပေါ့။ ဒီလို ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေကို လက်တွဲခေါ်လို ့မရရင် တန်ရာတန်ရာ နေလို ့ပဲပြောရမှာပဲ။ Captain
ငါလိုးမသားတွေ ( ထိခြင်တဲ့ကောင်ထိကွာ )
ခင်ဗျားတို့ကောင်တွေ နိုင်ဂျံဂါးရောက်တာနဲ့ ဖင်ဂေါင်းကျယ်ဖို့ဘဲသိတယ်
လီးလိုလိုမှိုလိုလို ဆရာကြီးစတိုင်တွေနဲ့ ကီးဘုတ်ပေါ်ကနေအော်နေကြတာဘဲ
ကင်းခပေးရမယ် ပေါ်တာခပေးရမယ် ဘာစရိတ်ညာစရိတ်ပေးရမယ်
ကျုပ်အိမ်မှာ လျှပ်စစ်မီးမရှိဘူး ထမင်းချက်ဘို့ ထင်းခုတ်တာကို သစ်တောဥပဒေနဲ့ဖမ်းတယ်
ကိုအောင်ပု ပြောတာ မှန်တယ်
အစက ပိုစ့်က ဟုတ်မလိုလို နဲ့
ကိုအောင်ပုဘက်က တစ်ချောင်း ဝင်ကူတယ်
ဒီလိုလူကို အမှိုက်လို ့ခေါ်တယ်။ ဘယ်သူ ့အတွက်မှာ အသုံးမဝင်ဘူး။
မသိနားမလည်သူတွေဖက်ကို ဘယ်လိုမှ နားမလည်ပေးကြဘဲနဲ့
နားမလည်ရင် ကောင်းကောင်းမေးရတယ်။ ဒါမှ အဖြေရမှာပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်ပြောတဲ့စကားကိုလည်း ပြန်ကြည့်ပါအုံး။ အရည်မရ အဖတ်မရနဲ ့။ ဆဲတယ်ဆိုတာက လွယ်လွယ်လေး။
ပြန်ဆင်းဖို့ ဆက်တာပဲ သိတယ် …
ဒါပေမယ့် ဇီးသီးသည် မဗျိုင်းလို
အဖြစ်မျိုးတော့ ရှောင်ရမပေါ့ …
အမြင့်ရောက်ပြီးမှ ဘာလို ့အောက်ကို ပြန်ဆင်းတော့မှာလဲ။ အမြင့်ရောက်ဖို ့ကို မနည်းကျိူးစားပြီးတက်ခဲ့တာ။ အချောင်ရတာမှ မဟုတ်တာပဲ။
အချောင်ရတာမှ မဟုတ်တာပဲ…ဆိုတဲ့စကားကို ဘယ်မျက်နှာနဲ့ပြောတာလဲဟင်
ငတေ ဆိုတာ သိပြီးသား
ဩဇီက အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာအတွက်
တစ်ပြားတစ်ချပ် ဘာမှမရယူခဲ့ဘူးလို့ ပြောရင်…..
ရယ်စရာ အရမ်းကောင်းမှာပေါ့ လို့
ယွန်းနဒီ ဆိုတဲ့ တစ်ယောက်လဲ လာရှင်းပြနိုင်ပါတယ်နော
…YE YINT HLAING ….
မင်းကို ပြောမယ် ငါကိုအခြောက်လို့ပြောပြောအစိုလို့ပြောပြော
ကိစ္စမရှိဘူး မင်းမဆဲသင့်ဘူးကွ ဆဲတယ်ဆိုတာမင်းတင်ရေးတတ်တာမဟုတ်ဘူး
အားလုံးရေးတတ်တယ် ထိမ်းထားကြလို့ကွ ….
အနောက်နိုင်ငံတွေ မှာလူငယ်တွေ၁၈နှစ်ပြည့်သွားယင် ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်
မိဘတွေ ရှေ့မှာတောင်မစောင့်ထိမ်းကြတာ စောင့်ထိမ်းရကောင်းမှန်မသိကြတာ
ကိုဘုန်းကျော်သိအောင် ရေးပြတာ ငါရေးတာတော်တော်လွန်နေတယ်လား …
သူမှာသမီးတွေရှိတယ်လို့ပြောတော့ ငယ်သေးလို့ မဆိုင်တဲ့ကလေးတွေဆွဲထည့်လို့
မင်းတို့ကပြောယင် အေး ငါတောင်းပန်တယ်…
သူရေးတဲ့ ပို့စ်တွေ သူ့သမီးတွေစာဖတ်တတ်လို့ဖတ်ကြမယ်ဆိုယင် ..
တော်လှန်ရေးနဲ ့တော်သလင်းလ (Celebrity Gossip)
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိခိုက်မဲ့ လူနာမည်တွေတိုက်ရိုက် ထည့်ထားတယ်…
( ညဖက်တော့ ဒွိယံ ဒွိယံ။ နေ့လည်က ချိန်းချက်ထားတဲ့အတိုင်း တော်သလင်းဇာတ် ခင်ကြသတဲ့။
ခရီးစဉ် တပတ်အတွင်း SYCB ကိုယ်စားလှယ် လူငယ် ၃- ယောက်က ဆရာမကြီး သင်းသင်းအောင်ကို တလှည့်စီပျော်တော် ဆက်ခဲ့တယ်လို ့သိရတယ်။
ဒေလီပြန်ရောက်တော့ ချာတိတ် တကောင်ကို တော့ ၁- လ ၊ ၂- လောက် ဆက်စားပြီး ကျန် ၂- ကောင် ကိုတော့ အတည်ပေါက်ကြီး ဆက်ဆံပါတယ်။ )
အရွယ်ရောက်နေတဲ့ သားသမီးတွေ ဆိုက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာ သိထားသင့်တယ်…
ဘုန်းကျော် စာဖတ်သူတွေကို ဘယ်လောက်စောကားထားတယ်ဆိုတာ..
ကိုဘုန်းကျော် ဘက်က နာစရာ အကြောင်းမရှိဘူး ! သူ့ကိုသိတာလည်း ဂေဇက်မှာသိသလို အားလုံးကိုလည်းဒီ အတိုင်းပဲ ။ စိတ် နဲ့ ရေးတဲ့စာကို စိတ်နဲ့ပဲဖတ်ကြတယ် ။ အဲဒီမှာ ခံစားချက် .အမြင် နဲ့ သဘောထားတွေမတူနိုင်ဘူး ။ မတူရ ကောင်းလားဆိုပီး နင်ပဲငစ မပြောသင့်ဘူး ။ ဝေဖန်ခွင့်ရှိတယ် ။ သို့သော် ဝေဖန်ရေးတောင်မှ အရှင်ဝီရိယ ဟောသလို အမှားကို ထောက်ပြရုံနဲ့ မပီးဘူး ။ ထောက်ပြချင်ရင်တောင် ဆိုင်သူကိုပဲ ပြောစေချင်တယ် ။ ကိုဘုန်းကျော် မိသားစု ကို အားလုံးလိုလို မြင်ဘူးကြပါတယ်။ သူ့သမီးငယ်လေး အပါအဝင်ပေါ့ ။ ဒီတော့ စိတ်ထဲမှာ သူ့မိသားစုကို ရင်းနှီးနေသလို ဒီကလေးတွေကိုလည်း ရင်းနှီးနေတယ် ။ အဲဒီ အတွက် ကလေးမ ဘက်က နာမိတိုမိတယ် ။ ဆဲချင်ရင် ဆဲလိုက် ပါ ။ ရင်ထဲ ရှင်းသွားတာပေါ့ ။ မဆဲပဲ နေရင် ရင်ထဲမှာ ကျန်နေမယ် ။ ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း ဆဲ ချလိုက် ။ ကိုယ့် အနာဂါတ်ကိုတောင် သေချာ မသိနိုင်တဲ့ လူတွေကြီးပါဗျာ ! သူ့မိသားစု ရှေရေး ကြိုတွေး ပီး ပူ ပေးတယ် ဆိုတဲ့ ။။။။။။ အိုကေ ဒီလောက်ပဲ ။ ကိုရင်မောင် က ကလေးအတွက် တောင်းပန်တယ် ဆိုတာကို သဘောကြတယ် ။ ကျွန်တော့ ကို ရင်ထဲမှာ ကျန်နေသေး ရင် တိုက်ရိုက် နာမည် တပ်ပြီး ဆဲ နိုင်တယ် ။ ဝယ်ကမ်း ပါ ။ ရိုးသား ပွင့်လင်းစွာ ဆဲနိုင်ပါတယ် ။ စိတ်တို ရင်ပေါ့လေ ။
ကိုယ့်စိုက်တာ ကိုယ်သာမက ကိုယ့် အသိုင်းအဝိုင်းကပါရိတ်ရပါသည် ။
နယူးဗားရှင်း အောဖ် ကိုဂီ :grin:
အမှန်တော့ဒီပိုစ့်က ပြည်ပမှာနေတာထိုင်တာများလာတဲ့အခါ ပြည်ပရဲ့ အနေထိုင်အလေ့ကျင့်တွေ
ကိုယ့်မှာရှိလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ပြည်က အလေ့ကျင့်တွေနဲ့ လိုင်းကွဲလာတာတွေရယ်
ဘယ်လိုဘဲ လိုင်းကွဲကွဲ အချို့နေရာတွေကြတော့ ကိုယ့်ရဲ့ မူရင်းဓလေ့အစားအစာတွေကို
ကျုပ်ဘဲကြောင်တာလား ဒီAဘေး ဘဲ အက်ဒစ်လုပ်လိုက်သလားမပြောတတ်
( ထောင်ကျခံရတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကို အထင်မကြီးဘူးဘာဘူး ) ဆိုပြီးပြောလိုက်တာ
မရေးထားဘူးဆိုရင်တော့ ကျုပ်ဂေါက်ထတာဖြစ်မယ် စောဒီးဘဲ ကျုပ်ကိုယ်ကျုပ်တော်တော်ပြင်ရမယ်
ဆဲတာဆိုတာတွေကတော့ ပေါက်လွှတ်ပဲစား အဆင့်မရှိတဲ့ကောင်တွေအလုပ်ပါ
ဒီလို ဘာအဆင့်မှ မရှိတဲ့ကောင်တွေနဲ့ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါ ဘယ်လိုအရောမဝင်ဘဲနေမယ်
ဘယ်လိုဆုံးမမယ် ဘယ်လိုအသိပေးမယ် ဒါတွေကိုနားလည်ထားရမယ်
ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့တွေဟာ တိုင်းပြည်တွက်ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဖက်က လုပ်ခြင်တယ်ဆိုရင်
သိထားကြဘို့က ခင်ဗျားတို့လို သိတဲ့တတ်တဲ့လူတွေရဲ့ အရည်တွက်ဟာ သိပ်နည်းနေတယ်
အဲ့သည်အခါကြရင် မသိသူတွေကို အပြစ်ကြီးဘဲဖို့နေလို့ ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူး
ကိုယ်မှာ ဘာလုပ်ရပ်တွေ အပြောအဆိုတွေရှိတယ်ဆိုတာ သိတတ်ဘို့လိုလိမ့်မယ်
ခင်ဗျားတို့ဟာက တစ်ခါလာလည်း မသိနားမလည်တဲ့သူတွေအပြစ်ပြောရတာနဲ့
ဟိုလိုဖြစ်ရတာနဲ့ ဒီလိုဖြစ်ရတာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လူလို့ထင်ရင် လူလိုတွေးကြပေါ့လကွာ
တစ်ခုပြောခြင်တာက လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့ အတိုက်ခံတွေကိုတော့
အတတ်နိုင်ဆုံး ညှာညှာတာတာဝေဖန်သင့်တယ်လို့ အကြံပေးတယ်ခေါ်မလား သတိပေးတယ်ခေါ်မလား
လက်ရှိမှာ ကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းဘဲ အတိုက်ခံတွေဟာ နွားအုပ်စုတွေနဲ့
မျက်နှာခြင်းဆိုင်ရင်ဆိုင်နေရတာ တောထဲက သဘုံဆိုတဲ့ကောင်တွေကတောင် မဟန်ရင်
ဒီအတိုက်ခံတွေ အရမ်းအန္တရယ်များတယ် နွားအုပ်စုတွေ မကြိုက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီဖြစ်ထွန်းရေးကို
လက်သီးပုန်းတွေ ထောင်ခြောက်တွေ ဘေးကျပ်နံကျပ်တွေ အခက်ခဲပေါင်းစုံနဲ့ကြားကလူတွေကို
သဒေါင်ဒစားထမင်းဝလို့ လီးတောင်ပြတဲ့လေသံတွေနဲ့ မပြောကြဘို့တော့လိုမယ်ထင်တာဘဲ ( အထင် )
တစ်ခါတစ်လေကြတော့လည်း ဒီလိုဘဲ ကိုယ်နဲ့လည်းမသိဘဲနဲ့ အင်တာနက်ထဲကနေ ရန်ဖြစ်နေကြတာလား
အာဘော်တွေပေးနေကြတာလား အဲ့ဒါတွေက ပျော်စရာတော့အကောင်းသား
( လေ့လာတတ်ရင်တော့ ဘယ်သူသည်းခြေကောင်းသလဲ သိသာပါတယ် )
ဆိုခဲ့ပြီးသလို ပိုစ့်မှာပါတဲ့ ရေခြားမြေခြားကိုရောက်တဲ့အခါ ဓလေ့တွေပြောင်းသွားတာကတော့ဟုတ်တယ်ဗျ
ကျုပ်ဆို ရွာမှာဆန်ကြမ်းဘဲစားတယ် ခုမစားနိုင်တော့ဘူး
ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ ငပိထောင်းတို့ ငါးငပိတို့ကို အလုပ်ကြီးအကိုင်ကြီးတစ်ခုလို ရှာစားတယ်
ရွာမှာ တောဘဲချတယ် ခုမချနိုင်တော့ဘူး
ရွာမှာဆို ကြမ်းပျင်မှာဖျာခင်းပြီးအိပ်တယ် ခုဆို မွေ့ယာတွေ ညအိပ်ဝတ်စုံတွေနဲ့
တစ်ခါတစ်လေခပ်မူးမူးနဲ့ အိမ်ပေါ်တက်မရဲလို့ ကောက်ရိုးပုံမှာ ခွေခဲ့ရတာကိုလည်းအမှတ်ရသပေါ့
စေတနာသည် ကံတဲ့။ ဘပုရဲ့စာမှ စေတနာကိုခံစားလို့ရပါသည်။
ဘုန်းကျော်ကတော့ ဆရာကြီးလဲလုပ်ချင် ငတေ့စည်းစိမ်လေးများလဲ လက်မလွတ်ချင်ဖြစ်နေပုံရတယ်။ ဒါလူ့သဘာဝပါပဲ။ အပြစ်တင်ဖို့တော့ခက်ပါတယ်။ အနေအထိုင်တတ်ခဲ့ရင်ပေါ့…
ဒီအချိန်မှာ ဘုန်းကျော်တစ်ယောက် မဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ရင်… ဧည့်သည်ဆိုတာဟာ အိမ်ရှင်မျက်နှာကြည့်ပြီးပဲနေရမှာပါ။ ရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်းများရဲ့ တကဲ့အနှစ်သာရကို သိလာတဲ့အချိန် အခါလွန်မိုးမဖြစ်တန်ကောင်းဘူးလို့တော့ ……
ဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်လေတော့လဲ လူတွေဟာ နာကျင်မှုမှာတောင် နေသားကျ ပျော်ရွင်တတ်ကြပါတယ်…. Pleasure of pain… လေ….
နောက်ဆုံးတော့လဲ …. စေတနာသည် ကံပေါ့….